Fitombenana mirafitra tsara…araho ireto
Raha maniry handrafitra ny fitombenana ho boribory tsara sy ho avoavo dia ireto misy fihetsika azonao atao na dia ao an-trano ihany aza.
Ny tena fanaovana spaoro ao an-trano
Tsy voatery ho any amin’ny toerana voatokana hanaovana spaoro ihany vao afaka manao izany. Azo atao tsara ny manao fanantahantena ao an-trano. Ireto misy karazany azonao atao
Mitsabo lamosina amin’ny “gym”
Azonao ampiasaina hampitoniana ny fanaintainana ao amin’ny lamosina ireto fampihetseham-batana ireto fa andramo :
Mila dabilio sy « haltères » na tavoahangin-drano milanja 1 kilao avy.
Matory eo ambonin’ilay dabilio fa atao mitehaka amin’ny tany ny tongotra. Hatsotra ambony ny tanana roa mitazona ilay “haltères”. Aforitra ny kiho avy eo sady sintonina hivoaka tsara hanalavitra ny vatana ny kiho. Averina im-10 izay fihetsika izay ary izay no andiany iray. Miato kely dia mamerina andiany iray hafa. Tokony mahavita andiany 4.
Eto indray dia “tapis” no ilaina. Matory amin’ny kibo aloha dia akarina ny vatana sady atsotra be ny tanana. Ny lohan-tongotra kosa no itehenan’ny tongotra. Raha efa izay dia aforitra ny kiho sady ampidinina ny vatana dia averina hiakatra indray. Atao tsara misy misintona ao aorian’ny lamosina miantraika amin’ny tratra. Izay fihetsika izay no averina in-10 isaky ny andiany. Manao andiany 4.
Miverina matory eo ambonin’ilay dabilio teo indray. Mitazona “haltères” na tavoahangin-drano izay zaka isaky ny tanana. Akarina ny tanana. Tsy tena atsotra be akory izy eto. Alatsaka amin’ny andaniny roa amin’ny vatana, toy ny hoe “hitarina hivelatra ny tratra” dia averina amin’ny paozy niaingana. Izay fihetsika izay no averina im-15 isaky ny andiany. Manao andiany 4.
Raha vitanao matetika ireo, indroa na in-telo isa-kerinandro ohatra, dia ho hitanao fa hisy fiovana ny tratranao.